Paozy eo am-pandriana, samy manana ny tsirony
« Levrette » : manaiky hanjakana
Ny lehilahy ao aoriana, ny vehivavy kosa mandady eo anoloany. Tian’ny vehivavy izy ity noho ilay lehilahy afaka mikitika an-kahalalahana ny tratra sy ny kitso. Mahatsiaro ho hanjakan’ny lehilahy tanteraka ny vehivavy amin’izany.
“Missionnaire” : oroka mamy
Ity no fihetsika mora indrindra amin’ny paozy mandritra ny firaisana ara-nofo. Mankafy azy avokoa ny ankabeazan’ny vehivavy. Isan’ny manamarika azy indrindra ny fifampizaràna oroka mamy, ny maso mifampijery, ny tanana mifamihina…
« Andromaque » : afaka mandidy
Ny 14%-n’ny vehivavy no tia azy ity. Tsotra ny antony satria mahatsiaro ho manjakazaka amin’ilay olon-tiany ny vehivavy. Izy no mandidy ny zavatra ataony : mora, mafy, haingana, milamina… Mampientanentana rahateo ny mahita ilay olon-tiana ao ambany, maka aina, mijery ny tapany ambony amin’ny vatana.
“Cuillère” : Voaaro
Mahatsiaro tena ho voaaro ny vehivavy rehefa manatanteraka an’ity fihetsika ity. Samy matory mihorirana ka manome lamosina ny lehilahy ny vehivavy. Matsiro ho an’ny vehvivy ity fihetsika ity satria ahafahana mampiditra lalina ny filahiana. Eo ihany koa anefa ireo orokoroka amin’ny hatoka, ny soroka …
“Grenouille à la nage” : Hoditra mifampikasoka
Matory mihohoka eo ambony fandriana ny vehivavy, matory eo amboniny ny lehilahy rehefa manofoka ny filahiana. Voalazan’ireo manam-pahaizana ara-pananahana fa fomba iray hilalaovana ny fahatongavana amin’ny fahafinaretana faran-tampony, ho an’ny vehivavy, ity fihetsika ity. Mifampikasoka rahateo ny hoditry ny andaniny roa.